Ọdịnaya Ogologo: Nlebara Anya na Ntinye aka | Martech Zone
Monday, November 14, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ihe karịrị afọ 10 gara aga, edere m ya oge nlebara anya na-abawanye. Ka anyị na ndị ahịa rụkọrọ ọrụ ọtụtụ afọ, aga n'ihu igosipụta nke a n'agbanyeghị akụkọ ifo na ndị na-agụ akwụkwọ, ndị na-ekiri, na ndị na-ege ntị agaghị anọgidesi ike. Ndị ndụmọdụ na-aga n'ihu na-ekwu nke ahụ nlebara anya belatara, ana m akpọ bollox. Ihe gbanwere bụ nhọrọ - na-enye anyị ohere ịmị ọsọ ọsọ adịghị mkpa, adịghị mma dị mma, ma ọ bụ na-adịghị etinye aka ọdịnaya ịchọta ọdịnaya dị ukwuu.
Mgbe mbụ m bidoro pọdkastị anyị, ndị enyi m nọ na ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ nweghị onye ga-ege ihe karịrị nkeji isii… ebe a anyị bụ ọtụtụ afọ ma emechaa, pọdkastị kachasị wee dị nkeji iri atọ ruo iri isii. Ọbụghị naanị nke ahụ, ndị na-ege ntị na-ege ntị ọtụtụ awa na pọdkastị. Heck, m ụgbọala Florida na-ege ntị na Serial Podcast ruo awa 8 n'okporo ụzọ.
N’ime ngwụsị izu, ndị enyi m na-achịkarị ọchị banyere ị bụ oké egwu-na-ekiri oge a na-eme ihe nkiri! Nke ahụ ọ bụ obere oge elebara anya? Ọ dịghị ma ọlị. Ọbụna oriri mgbasa ozi na-agbanwe. Nke a bụ ihe omumu na nso nso a site na Youtube na ogologo vidiyo Ad:
Ogologo mgbasa ozi mgbasa ozi na Youtube Ads Leaderboard na 2014 ruru minit atọ - mmụba nke 47% vs. 2013. Ma ọ nweghị nke mgbasa ozi kachasị elu na 2014 na 2015 nọ n'okpuru nkeji. Ben Jones, Chee echiche na Google
Ya mere, ruo afọ iri, mgbe a jụrụ m "Ogologo oge?", M na-ekwu mgbe niile ogologo iji kọọ akụkọ ahụ na agaghịzị. Maka ndị ahịa anyị, nke ahụ na - eduga anyị na - ebipụta obere isiokwu kwa izu, mana ijide n’aka na edemede ọ bụla dị omimi. Maka ndị ahịa anyị na-ege ntị, ebumnuche bụ ịdekọ mgbe enyere uru, wee mechie ihe nkiri ahụ. Maka vidiyo, ebumnuche bụ ịnye vidiyo na-akpali akpali ma ọ bụ vidiyo. Elegharala anya na nkeji ole vidiyo ahụ dị, ,aa ntị na etu ọ siri kọwaa akụkọ a ma mee ka onye na-ekiri ya na-ekiri.
Ekwenyere m na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-a attentiona ntị na ibiaghachi ọnụego na echiche na-enweghị nyochaa ntụgharị. Ka anyị leba anya n'ihe atụ ole na ole:
Produce mepụtara vidiyo nlele nkeji abụọ nke ngwaahịa na ọrụ gị ma elere ya anya ugboro 2 yana 10,000% nke ndị na-ekiri na-ele ogologo vidiyo ahụ dum. Get nweta ajụjụ iri na abụọ maka azụmahịa gị ma mechie nkwekọrịta ole na ole ruru $ 90.
Produce mepụtara ihe ngosi nkeji 30 nke na-akọ akụkọ banyere azụmaahịa gị, otu o siri bụrụ, ndị ahịa ị nyere aka, usoro nke usoro gị, ma nye ụfọdụ ndụmọdụ maka ndị na-ekiri ha. A na-ele ya anya ugboro 1,000 na 10% nke ndị na-ekiri ogologo vidiyo ahụ. Nwetara ajụjụ ole na ole na azụmahịa gị ma mechie nkwekọrịta $ 100,000 mbụ gị.
Kedu nke bụ atụmatụ ka mma maka azụmahịa gị?
Anaghị m akụ obere ọdịnaya. Ọdịnaya na-eri ngwa ngwa nwere ike ịmalite mmata ma hapụ ụzọ akara achịcha nke nwere ike ime ka mmadụ nwee mmasị na oge. Isi okwu m bụ na ọ bụghị maka oge nlebara anya, ọ bụ maka itinye aka. Ndị mmadụ na-ehiekarị uche maka adịghị mkpa. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ abanye na peeji m, chọpụta ngwa ngwa na ọ bụghị ihe ha chọrọ, wee pụọ. Ọ na-adị m mma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ahapụ peeji m ịga saịtị nwere ọdịnaya ka mma!
Tags: anyaogologo ọdịnayanjikọ akaOgologo olena-ege ntịPodcast ogologochee na Googlevideo ad ogologovideo ogologoechicheyoutube
Ọnụọgụ ahịa 19 maka Email, Ekwentị, Ozi olu, na ire ọhaneze
Dec 12, 2016 na 7:31 PM
Dị ka "onye ndụmọdụ", na-emegide okwu stereotype, ekwere m na 100%. Uzo m banyere nlebara anya di iche. M na-akọwara ndị ahịa m na elebara anya ma ọ bụ na ọ bụghị mkpụmkpụ… anya na-elekarị anya karịa. Ihere dị warara nke na-ekwu maka mkpa ha na ihe ha chọrọ.